Tunisia njem laghachiri na azụmahịa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia » Tunisia njem laghachiri na azụmahịa
Na-agbasa News Travel • omenala • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Mgbasa Ozi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ UK na -agbasa
Tunisia bu n’obi ichota ndi oru nlegharị anya ọzọ na WTM London 2017, na - esochi ozi oma na Thomas Cook na ndi njem njem Britain ndi ozo ga - alaghachi n’obodo site na mbido 2018.
Foreignlọ Ọrụ Mba Ọzọ nke UK gbanwere ndụmọdụ njem ya na July, na-emeghe ụzọ maka ndị ọrụ njegharị Britain ịmalite ire ụbọchị ezumike ọzọ na ebe a ma ama.
Tunisair na-ebu ụgbọelu nke mba - nke na-akwụsịghị na UK na Tunisia - na-arụ ọrụ ugbu a kwa ụbọchị site na London. Thomas Cook amaliteghachiri ire ezumike nke ga-amalite site na February 2018, na-egosipụta ụlọ oriri asatọ na nso ebe ezumike nke Hammamet.
Mounira Derbel Ben Cherifa, Onye isi na Ọfịs Ndị Nleta Na-ahụ Maka Ọchịchị na Tunisia na UK, nabatara ozi ọma nke ọma na Thomas Cook na ndị ọzọ, dị ka Just Sunshine, Holidays na Cyplon na Tunisia First, na-alaghachi Tunisia.
Ọ sịrị, “Obi siri anyị ike na ndị Briten ga-alaghachi ọzọ na Tunisia ebe ha jere ezumike ebe ahụ afọ iri anọ gara aga.
O kwuru na ọtụtụ puku ndị Briten raara onwe ha nye ka na-aga ezumike na mba North Africa n'agbanyeghị agbanyeghị mmachibido iwu nke Ofesi.
Derbel Ben Cherifa kwuru na isi ozi na WTM London ga-abụ "Tunisia mepere maka azụmahịa ọzọ".
"Anyị ga-akpọtụrụ ndị mmekọ anyị ma melite ha maka ngwaahịa ọhụrụ, ihe omume na ịkọ aha gbasara njikere anyị ịnabata ndị njem Britain," kwuru.
Tunislọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem Nleta Mba nke Tunisia na-emepe atụmatụ ahịa na ndị mmekọ azụmahịa, dị ka ndị na-eme njem nlegharị anya, ndị mgbasa ozi na ndị ọrụ njem, yana ndị ahịa.
O kwuru na Thomas Cook - nke nọchiri anya ihe dị ka ọkara ahịa UK - na ndị na-eme njem nleta na London yana Tunisia, ebe o nwere nnukwu mmasị ịmaliteghachi mmemme ya nke Tunisia ozugbo enwere ike.
Tupu mmachibido iwu ahụ na 2015, ihe dị ka 420,000 Brits gara Tunisia kwa afọ. Na 2016, nke ahụ ruru ihe karịrị 23,000 n'ihi mmachi.
Ọnụ ọgụgụ na-arị elu na 2017, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 17,000 na-eme njem n'ime ọnwa asatọ mbụ nke afọ, elu 14% ma e jiri ya tụnyere otu oge na 2016.
Derbel Ben Cherifa na-eme atụmatụ na ọnụọgụ ga-eru 30,000 na 2017, ma ga-enwe ihe karịrị okpukpu abụọ na 2018 ruo 65,000.
O kwuru na ndị njem nleta ga-arụ ọrụ iji mesie ndị njem obi ike ma gosipụta nke ndị Tunisia ebe nkiri, dị ka wintersun nzere, ọdịmma emmepe, nlegharị anya na niche ahịa.
O nwere ihe karịrị 700 kilomita nke ụsọ oké osimiri n'akụkụ Mediterenian; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ oriri 800, na-eri nri maka ọtụtụ mmefu ego; na 10 usoro ọmụmụ golf mba ụwa.
E nwere akụkọ ihe mere eme na saịtị malitere kemgbe ọtụtụ puku afọ, na ama filming ebe maka fim dị ka The English Ndidi, Monty Python's Life of Brian na ọtụtụ fim si Star Wars aha.
Nakwa na isonye na WTM London, ndị njem na-eme atụmatụ ịzụ ndị ọrụ njem UK na usoro nke ụzọ na njem ezinụlọ, nke ejikọtara ya na ndị na-eme njem. A na-eme atụmatụ ịmegharị njem nleta iji nweta ozi ahụ banyere Tunisia.
World Travel Market London, Onye isi Director, Simon Press, kwuru, sị: “Nke a bụ nnukwu akụkọ maka azụmahịa ndị UK. Amaara m na ndị ọrụ njem njem Britain nabatara nlọghachi nke ezumike ndị Tunisia, ebe ha nwere ọtụtụ ndị ahịa na-ajụ maka ezumike na mba ahụ.
"Ọ bụ ihe agbamume ịhụ etu Thomas Cook nwere ike isi malite ire ezumike n'ahịa ndị Britain, ebe ọ nwere ndị otu egwuregwu maka ndị ahịa German, ndị Belgium na ndị France, ndị gọọmentị na-adụghị ọdụ ka ha gaa mba ahụ."